Darajadaada Noolaha Ma Muhiimbaa? | Martech Zone
Darajadaada Noolaha Ma Muhiimbaa?
Arbacada, December 28, 2011 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Waqtiga aan u ruxayo qaar SEO baalasha mar labaad! Maanta waxaan go aansaday inaan ka soo dejiyo tirakoobyadayda Google Search Console runtiina waxoogaa qodis ah ayaan ku sameeyaa taraafikada aan ka helayo raadinta dabiiciga. Martech Zone wuxuu si aan caadi aheyn ugu sarreeyaa dhowr eray oo muhiim ah oo leh daraasiin # 1 ah oo ku tartamaya, keywords keywords sare. Waxaan wada ognahay in darajada sare, ayaa sareysa heerka gujiska-ilaa bogga natiijooyinka mashiinka raadinta. Laakiin taasi miyey ku jirtaa sawirka weyn?
Ha ka dhimin guud ahaan taraafikadaada raadinta orgaanigga ereyada muhiimka ah ee aadan ku sarreynin ama leh mugga raadinta oo hooseeya. On our blog suuqgeynta, 72% ee taraafikadayada dabiiciga ahi waxay ka timaaddaa gelitaannada jira xitaa kuma yaal bogga 1! Xitaa ka sii xiiso badan ayaa ah inaan ka helno taraafiko badan darajo 8 ah inta aan ka helno darajada 1!
Waan ogahay inay taasi u egtahay cay, laakiin waxaad runtii u baahan tahay inaad ka fikirto tan maadaama aad fiirineyso istiraatiijiyad suuq-geyn ah. Ma ka muhiimsan tahay in lagu maal-galiyo darajada miisaanka sare, ereyada muhiimka ah ee tartamaya? Tani waxay noqon kartaa waqti iyo qaali. Ama, miyaad waqti galin kartaa dadaal si aad ubixiso waxyaabo kala duwan oo ku saabsan ereyada muhiimka ah ee dabo-dheer oo aan tartan ahayn laakiin aad ugu habboon ururkaaga?
Si aan runta u sheegno, tan dambe ayaan dooranay. Waxaan u maleynayay in darajada # 1 ay muhiim u tahay guusheena. Laakiin tan iyo markii aan ogaaday in gelinta tamar badan oo ku jirta nuxur weyn ay naga helayso feejignaan dheeri ah guud ahaan. Istaatistikadu been ma sheegaan… halka sicirka-riixitaanka ee bogga natiijada mashiinka raadinta uu si weyn kor ugu kici karo markii aad gaarto booska # 1, taraafikadayada ku saleysan darajeynta macno malahan inta badan. Waan ognahay inaan ku geli karno natiijooyin wanaagsan oo leh nuxur weyn… maxaa diidaya inaan si fudud uga shaqeyno taas oo aan u kordhino taraafikadayada dabiiciga ah ee ku habboon tayada tayada halkii aan ka heli lahayn bulseye markasta?
Samee qiimeyntaada gaarka ah ee darajadaada dabiiciga ah. Aaway inta badan kuwaaga gaadiidka ka imanaya? Xitaa su'aal ka fiican, halkee inteeda badani tahay ganacsi ka imanaya? Malahayga waa inuu ka imanayo noocyo kala duwan oo dabada-dheer ah, baadhitaanno khuseeya. Ii cadee khalad! 🙂
Gabi ahaan kama wada eryi doono darajada sare ee shuruudaha tartanka. Waa tilmaan weyn oo maamulka ah waxayna wadi kartaa taraafiko badan. Sidoo kale, darajaynta sare ee ereyada muhiimka ah qaarkood waxay umuuqataa inay laxiriirto darajada sare ee keywords badan oo laxiriira. Isku darka ayaa wadi kara tan oo taraafiko ah. Waxaan si fudud ugu doodayaa qaab isku dheelitiran. Halkii aad isku dayi lahayd inaad ku hesho homerun leh fiidmeer kasta, way fiicantahay marwalba mar in la isku dayo oo sal la helo!
Cusboonaysiinta: Kadib markaan la wadaago qoraalkan, waxaan ogaaday inaanan ahayn qofka kaliya ee arintan ogaaday Gaadiidka Chase, Maaha Qiimeyn.
Tags: ctrdarajada googlegoogle +darajada keyworddheerkeyword keywordPagerankdarajeeyoserp
Isbeddellada Tiknoolajiyadda Sare ee 2011
Ka Qaybgalka Fiidiyowga ee Qalabka
28, 2011 at 4: 59 PM
Runtii tani waxay ahayd qoraal wanaagsan Doug. Ragga beenta, Dumarka beenta, Tirooyinka ma sheegaan. Marka lambaradaada, waxaan dhihi lahaa waxaad ku jirtaa meesha - oo ka sii muhiimsan, shirkadaha aan macaamilka u jeedin waa inay tixgeliyaan qaabkan. Waxaan xafiiska imanayaa dhowr maalmood usbuuca dambe oo waan shaqeynayaa - Waxaan jeclaan lahaa inaan si qoto dheer uga sii dago arrintan. (PS: Waxaan ahay 2 todobaad barashada teamtreehouse.com. Qaar ka mid ah xisbiyada ayaa go'aansaday inay bartaan qorida nambarkiisa. Ogeysii Mr. Coley! Wuxuu ka heli doonaa laad! HA
29, 2011 at 8: 03 AM
Awoodda iyo saameynta ereyada muhiimka ah ee la xiriira ayaa aad muhiim u ah. Xusuusnow in Qalabka Webmaster-ka ee Google kaliya uu soo bandhigo qayb ka mid ah darajaynta (1,000 keywords).
29, 2011 at 7: 39 PM
Marka mawduucani ma leeyahay adwords ku xiran sidoo kale? Si kale haddii loo dhigo ma waxaad ka heleysaa taraafikada lacag bixinta adwords iyo liistada noolaha ayaa muuqatay. Waxaan u maleynayaa in adwords ay sifiican u shaqeeyaan marka ay yihiin liisaska u dhigma ee la arki karo. Marka la eego xulashada dadku waxay gujinayaan lacagta lagu daro (marka kan kale la arki karo) tani waxay keenaysaa in adwords ay noqdaan isha taraafikada lambarradana waxay ku rinjiyeyn doonaan dabiici ahaan kuwo aan muhiim ahayn laakiin runta ayaa ah in CTR ay ka hooseyn lahayd la’aanta meelayntaas dabiiciga ah.
Fikir weyn oo dhiirigelin leh.
29, 2011 at 7: 49 PM
@ktatgenhorst: disqus Nope, ma sameyno wax raadis lacag ah oo aan ku kasbano taraafikada.
30, 2011 at 2: 52 PM
Doug, talooyinkaagii ugu dambeeyay, cayrsiga taraafikada, qiimeyn maahan sida saxda ah waxa dadka badankood aysan helin. Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa inay tahay sababta oo ah qiimeyntu way fududahay, taraafikada way adag tahay iyo beddelaad, ha ahaato qasabno xayeysiis ah, hogaamin ama iibin xitaa way ka adag tahay.
Mar 12, 2012 at 2: 31 PM
Hi Doug, waan jeclaa qoraalkan laakiin waxaan lahaa faallo ku saabsan qeexitaankaada darajooyinka SERP ee maqaalkan. Haddii mawqifkaagu yahay in shaqsiyeynta Google SERP ay qeexitaan guud ka sameysay Google "darajayn" aan khusayn, qeexitaan noocee ah ayaad u adeegsanaysaa daraasaddan? Si kale haddii loo dhigo, waxaad sheeganeysaa in 72% taraafikadaadu ay ka imaaneyso ereyo muhiim ah oo aadan xitaa ku qori karin bogga 1aad ee Google SERPs, laakiin haddii qof walba shaqsi ahaantiisa shaqsiyan loo sameeyo, waa kuma Google SERPs aad ka hadleyso? * Qof * ayaa uhelaya bartaada internetka ereyada muhiimka ah, sax? Iyo fursadaha ay ku raadinayaan bogga 2,3,4 iwm ee Google SERPs way hooseeyaan. Marka iyaga, adigu waxaad kuxirantahay bogga 1aad, haddii kale malaha kumaba heli doonaan tirooyinka tirada badan ee aad ka hadlaysid.
Mar 12, 2012 at 2: 36 PM
Dhab ahaantii, taasi maahan kiiska Tod. Sida maqaalku muujinayo, inta badan taraafikada raadinta ee aan helayo MA AHA meesha aan ku meelaynayo ee bogga koowaad. Dulucdaydu maahan darajadan MA AHA muhiim…. ujeedkeygu waa in DIIWAANGELINTU ay aad uga muhiimsan tahay darajada. Haddii aad diirada saarto waxyaabahaaga oo aad qorto waxyaabo aad u wanaagsan, dadku way ku heli doonaan. Darajo kasta ha noqotee.
Waxaan sidoo kale tan ku aragnaa macaamiisheenna. Mug sare, ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ayaa wata taraafikada qaarkood laakiin ma ahan beddelaad. Is-beddelka ayaa ka imanaya bogag aad u khuseeya iyo qoraallo ka imanaya keywords keywords-dabo dhaadheer ayaa ka imanaya meelaynta SERP ee ka baxsan bogga koowaad. Mar labaad, ku habboonaanta darajada.
Mar 12, 2012 at 3: 06 PM
Doug, maqaalkaagu wuxuu ahaa mid aad u cad in 72% taraafikadaadu aysan ka imaanayn su'aalaha aad ku qorto Bogga 1 ee SERPs. Su'aashaydu waxay ku saabsan tahay fikradda ah "darajo" da'da shakhsiyadda SERP. 72% ka mid ah taraafikadaada raadinta dabiiciga ah ayaa ku heshay… si uun. Sidee bay kuu helayaan haddii aadan ku qornayn Bogga 1 ee weydiimahaas? Shakhsiyeynta SERP ma timid illaa iyo hadda in qof walba Page 1 uu aad uga duwan yahay?
Mar 12, 2012 at 3: 16 PM
Ilaa xad… Qaar ka mid ah macaamiisheennu waxay arkayaan kala badh booqashooyin ka yimid raadinta shakhsi ahaaneed. Laakiin kani maahan raadinta shakhsi ahaaneed… Xogtan waxay ka timid Maamulayaasha Websaydhada. Kani waa dadka AY gujinayaan bogga hore ee 1 raadinaya natiijo RELEVANT ah.
Mar 12, 2012 at 10: 40 PM
Had iyo jeer waxaan ku hoosjiraa fikirka ah in dadku markay ka heli waayaan waxa ay rabaan Bogga 1, ay si fudud dib u weydiiyaan, waydiiyaan su'aasha si ka duwan, halkii ay aadi lahaayeen Bogga 2. Taasi waa waxa aan had iyo jeer maqli jiray oo ku jiray Xaqiiqda taasi waa waxa aan marwalba sameeyo. Haddii waxa aad sheegeyso ay run yihiin, dabeecada raadinta dadku si aad ah ayey isbeddelaysaa.
Mar 14, 2012 at 12: 14 AM
Tod - taasi waa hubaal sidaan u sameeyo raadinta. Laakiin waligeed ma joogsaneyso inay iga yaabiso sida dadka kale wax u raadiyaan. Tusaale ahaan: Qaar badan, dad badan, dad badan ayaa jumladaha oo dhan ku qora mashiinnada raadinta halkii ay ka noqon lahaayeen dhowr eray oo keliya. Waxaan kala shaqeynay macaamiisheenna sidii loo horumarin lahaa Su'aalaha inta badan la weyddiiyo. Yaa ogaa ?!
Mar 12, 2012 at 5: 16 PM
Doug, runtii waan jeclahay maqaalka. Mantradaydu marwalba waxay ahayd macaamiisha ugu horreyntii labaad. Haddii waxyaabahaaga ay ka codsanayaan macaamiishaada had iyo jeer way ku heli doonaan.
Mar 14, 2012 at 12: 46 AM
Inta badan taraafigeygu wuxuu ka yimaadaa tiirarka tiirarka ee aan qoray sanado ka hor. Dabada dhaadheer waxay i siisaa socodka joogtada ah ee taraafikada maalinba maalinta ka dambaysa. Ereyga "tiirka tiirarka" ayaa xoogaa si xun loogu xadgudbay waqti ka dib. Markaan idhaahdo “tiirka boostada” waxaan ula jeedaa qoritaanka nuxur asal ah oo anfacaya oo laxiriira bartahayga iyo buuxinta baahida dhabta ah ee bulshada. Ma aha oo kaliya daaweynta waxyaabaha sida qaar ay sameeyaan. Ahaanshaha qofkii ugu horreeyay ee buuxiya baahidaas ayaa aasaasay mawduucayga Googebot oo ah Awoodda mawduuca.
Post wanaagsan Doug.
Mar 14, 2012 at 1: 58 AM
Mahadsanid @blogbloke: disqus! Had iyo jeer way fiicantahay inaad ka hesho amaan mid ka mid ah hormuudka. 🙂